Hadii Aad Dareemeyso Caajis Joogto Ah Waa Inaad Sameysaa Qaabkaan si Aad U Noqoto Shaqsi Firfircoon.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Hadii Aad Dareemeyso Caajis Joogto Ah Waa Inaad Sameysaa Qaabkaan si Aad U Noqoto Shaqsi Firfircoon..
Published: September 26, 2016, 12:00 am
(0) Comments Waxaan markasta la yaaba caruurta sida markasta diyaar ugu yihiin inay ciyaaraan waqti kasta iyo meel kasta iyagoon dareemeyn wax daal ah, waxaa ka muuqata xamaasad iyo fifircooni. Laakin dadka waaweyn markasta waxey dareemaan caajis, hurdo iyo tamar la’aan, intaas waxaa usii dheer istarees. Si kastaba waa kuwan qaar ka mid ah waxyaabaha aad ku dareemi karto xamaasad iyo firfircooni.
Seexo Hurdo kugu filan
Hadii aad dooneyso tamar iyo firfircooni maalintii, waa inaad seexataa hurdo kugu filan habeenkii. Laakin hadii aad si xun u seexato, la yaab malaha inaad dareemi doonto Lulmo ama hurdo maalintii. Ugu yaraan waa inaad seexataa 6-8 saacadood habeenkii si aad maalintii u dareento xamaasad iyo firfircooni.
Si fiican wax u Cun
Qof kasta wuxuu jecelyahay inuu firfircooni ku joogo, laakin dadka inta badan kama fakaraan waxa ay cunayaan. Hadii aad dooneyso inaad barato sida loogu joogo firfircooni iyo xamaasad maalintii, runti waa inaad ka fakartaa wax aad cuneyso. Ku dadaal cuntooyinka ay ka buuxaan Vitaminada, fiber-ka, borotiinka IWM. Iska ilaali cuntooyinka caafimaadka u daran.
Mararka qaar shaqooyinkeena aad bay u badanyihiin kuwaasoo u muuqan kara inaysan dhamaaneyn, hadaba marka ay taasi dhacdo waxaad u baahantahay inaad sameysato jadwal aad ku qorato dhamaan liiska shaqooyinkaada. Tani waxay kaa caawineysa in shaqooyinkaaga aad u qabato sida ay ukala muhiimsanyihiin iyo waqti cayiman.
Si wanaagsan u fakar
Xaqiiqdi fakarka wanaagsan wuxuu kaa caawinayaa inaad faraxsanaato firfricoonina aad ku joogto maalintii. Si khaldan ha ugu fakarin waxa aad sameyneyso waa intaas oo ay kugu hogaamisaa saameen xun. Marka aad dooneyso inaad shaqo qabato si wanaagsan ugu fakar dadaalna ku bixi waad gaari doontaa natiijada wanaagsan.
Qur’aanka waa qowlka Ilaahay wuxuuna Ilaahay inoo tilmaamay inuu qalbiga dejiyo, sido kale qur’aanka dhageysigiisa waxay ku siineysaa firfircooni iyo xamaasad maalintii, sheydaankana wuu kaa dheeraanayaa.
W/D Safaana Haji Ahmed
« Warbixinta Ka HoreysayWaa Maxay Sababta Loo Calaamadiyey Xarfaha F Iyo J Ee Keyboard-ka Computer-ka?	Warbixinta Xigto »Sheeko Gaaban Oo Aad U Xikmad Badan Macquulna Aay Tahay In Yar Oo Akhristayaasha Ka Mid Ah Iney Fahmaan Macnaha Dahsoon.	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Comments are closed.